août 2021 – Madatopinfo
ANALALAVA: Fitondrana mamaha olana, vahoaka mandray andraikitra
Miara-misalahy ireo olom- boafidy sy voatendry ao amin’ ny Distrikan’ Analalava. Manatanteraka fitetezam- paritra nanomboka tamin’ ny 08 aogositra 2021 izy mba hanantonana misimisy kokoa ny vahoaka, hanampiana azy ireo.
EKLESIA EPISKOPALY MALAGASY FARATSIHO : Nakalaza ny faha 135 taona ny “station missionnaire” Anglikana Ramainandro
Ara- tantara dia anisan’ny toerana niandohan’ny fiangonana Anglikana teto Madagasikara ankoatra ny tany Mahavelona na Full Pointe i Ramainandro. Toerana iray manana ny tantarany sy ny lazany tokoa mantsy ny
KAOMANDIN’NY ZANDARMARIAM-PIRENENA: Tontosa teny Andrefan’Ambohijanahary ny fifamindram-pitantanana arak’asa
Notanterahana ny alatsinainy 23 Aogositra lasa teo ny famindram-pitantanana arak’asa teo amin’ny Kaomandy teo aloha eo anivon’ny zandarmaria, Jeneraly Njatoarisoa Andrianjanaka sy ny Kaomandy vaovao Andriantsarafara Rakotondrazaka. Teny amin’ny Toby
Matetika voahilikilika eny anivon’ny fiarahamonina na any an-dakilasy ireny ankizy manana fahasembanana ireny. Manoloana izany, dia nomena fiofanana tamin’ny alalan’ny
ASA VAVENTY: Hanafaingana ny fomba fiasa ny ministra Jerry Hatrefindrazana
Notanterahana ny alakamisy 19 Aogositra teny Anosy ny fanaovan-tsonia ny fitanana an-tsoratra ny fifamindram-pahefana teo amin’ny ministry ny Fanajariana ny
Notanterahana ny talata 17 Aogositra teny Faravohitra ny fifamindram-pahefana teo amin’ny Mpitahiry ny fitombokasem-panjakana sy Ministry ny Fitsarana teo aloha,
TOBY JENERALY RAMAROLAHY PHILIBERT: Nandray ny andraikiny amin’ny maha-SEG azy avy hatrany ny Jeneraly Gelle Serge
Tamim-piralahiana no nanatanterahan’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandamaria (SEG) teo aloha, Jeneraly Ravalomanana Richard sy ny SEG vao voatendry ny alahady